Ungayithumela kanjani idatha kusuka kuhlelo lokusebenza lwezeMpilo | Ngivela kwa-mac
Ungayithumela kanjani idatha kusuka kuhlelo lokusebenza lwezeMpilo
Kuya nge izinhlelo zokusebenza noma amadivayisi owasebenzisayo ukuqoqa ulwazi mayelana nempilo yakho, uhlelo lokusebenza Ezempilo ku-iPhone yakho kungalandelela izilinganiso zomzimba wakho, ukuqina, ukondleka, impilo yokuzala, ukulala, nokunye okuningi. Kuyindlela enhle yokuthola ukubuka konke kwezinga lomsebenzi nempilo yomzimba wethu ngokujwayelekile.
Thumela idatha yakho yezempilo
Ngemenyu yekhalenda singakhetha noma yiluphi usuku bese sibona izibalo ezihlelwe ezansi. Ngaphandle kwalokho, nathi singakwazi thekelisa yonke leyo datha kusuka kuhlelo lokusebenza lwezeMpilo, kungaba ukuhlanganyela nomqeqeshi womuntu siqu noma nodokotela. Ake sibone ukuthi sikwenze kanjani.
Okokuqala, vula uhlelo lokusebenza Ezempilo, khetha ithebhu "Yezempilo Yezempilo" kumenyu engezansi, khetha "Konke" phezulu kohlu. Njengamanje, azinakuba njalo ukuthekelisa izinhlobo ezahlukahlukene zedatha ngawodwana, ikuvumela nje ukuthi uthumele konke.
Manje, ekhoneni eliphezulu kwesokudla kwesikrini, cindezela isithonjana esithi «Yabelana».
Kumenyu ezovela, cindezela "Thumela", bese inqubo izoqala. Esikrinini uzobona iwindi elinenganekwane «Ithumela idatha yezempilo», kuzothatha isikhashana ngakho-ke bekezela.
Ekugcineni, khetha indlela ofuna ngayo thekelisa idatha Yezempilo: ungagcina ifayela le-.zip elidalwe kuDropBox, ulithumele ngeMeyili, ngomyalezo, njalonjalo.
Ngaphezu kwalokho, kukhona nohlelo lokusebenza olubizwa nge-QS Access ne-Health Importer lapho uzakwethu uManu wasitshela zonke izimfihlo zakhe lapha futhi lokho futhi kusebenza ngqo thekelisa idatha Yezempilo bese ukwazi ukuzilahla ku-iPhone entsha.
Ngale ndlela, awusilalelanga isiqephu se-18 se-Apple Talkings kuze kube manje?
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Izinhlelo ze-Mac » Ezinye izinhlelo zokusebenza ze-Mac » Ungayithumela kanjani idatha kusuka kuhlelo lokusebenza lwezeMpilo
oscar perez kusho
Alukho uhlelo lokusebenza lwaleyo datha olungadluliselwa ku-Mac yami futhi ngaleyo ndlela lube nayo ekhaya kukhompyutha yami.
Phendula u-oscar perez
I-TrendForce ikhombisa ukwanda kokuthunyelwa kwe-MacBook
Ama-iTunes Connect aqala kabusha indawo yangokwezifiso yama-podcasters